९ वैशाखको सुनौलो साइत एमाले-माअाेवादीले किन खेर फाले ? - Naya Patrika
सन्तोष भट्टराई काठमाडाैँ | बैशाख ०९, २०७५
गत १७ असोजबाट एमाले–माओवादी एकताको प्रक्रियाले ९ वैशाखका दिन पूर्णता पाउँदै थियो । २३–२५ चैतसम्म भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वदेश फर्किए । स्वदेश फिर्ती भएलगत्तै उनी राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न रारा पुगे भने ‘मुड फ्रेस’ गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगे ।
ओली राराबाट र प्रचण्ड सुकुटेबाट फर्किएपछि सोमबार आपसी छलफलमा जुटे । दुवै नेता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अढाई घण्टा एकान्त वार्तामा रहे । तर, पनि गाँठो फुकेन । ९ गते पार्टी एकता घोषणा गर्न कार्यदलले दिएको सुझाब प्रतिवेदनमै सीमित भयो, कार्यान्वयन हुन सकेन ।
एकान्त वार्ता र संयोजन समितिको बैठकमा भएको छलफलमा भएको प्रगतिबारे आज प्रचण्डले खुमलटारमा कार्यालय सदस्यहरूलाई जानकारी गराए । उनले नेताहरूलाई एकताका विषयमा देखिएको विवादित विषयका बारेमा ओलीसँग भएको प्रगतिबारे फेहरिस्त सुनाए । प्रचण्डले एमाले–माओवादीमा विलय नभई सम्मानजनक उपस्थिति चाहेको लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् ।
प्रचण्डले एकान्त वार्ताबारे के भने ?
एकान्त वार्तापश्चात् ओलीले आकस्मिक रूपमा स्थायी समितिको बैठक त्यही दिन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा डाकेका थिए । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘प्रस्तावनामा जनयुद्ध शव्द राख्ने विषयमा विमति छैन । चुनाव चिन्हमा सुर्य राख्न हामी राजी हुने र संख्यामा ५०/५० प्रतिशत राख्न एमाले तयार हुने सहमति भएको कुरा अध्यक्षले राख्नुभयो ।’
उनले थपे, ‘ओलीजीले पार्टीमा कन्भिन्स गर्न नसक्दा एकता संयोजन समितिको बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भनेर अध्यक्षले सुनाउनुभयो ।’ यसबीच गत बुधबार बिहान कार्यालय सदस्य तथा मन्त्रीहरू र अखिल क्रान्तिकारीका केही नेतासँगको छलफलपश्चात् प्रचण्ड पार्टी काम विशेषले चितवन पुगेका थिए ।
आज पुनः ओली–प्रचण्डबीच छलफल भएको छ । बिहान ९ बजे सुरु भएको ‘वन टु वन वार्ता’ तीन घण्टासम्म चलेको थियो । तर, आज राष्ट्रिय सभागृहमा गरिएको संयुक्त कार्यक्रममा पनि दुवैले एकतासम्बन्धी नयाँ खास घोषणा गरेनन् ।
एकता कहाँ अड्कियो त ?
बुधबार नेताहरूसँग प्रचण्डले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि उनको असन्तुष्टि छ । ओलीको भारत भ्रमण, सचिवको सरुवादेखि सरकारका काम गराइसम्म सत्तासाझेदार दललाई उपेक्षा गरेकाले भद्रसहमति कार्यान्वयन हुनेमा उनले संशय जनाएका छन् ।
गत ७ फागुनमा पार्टी एकताका सातबुँदे आधारपत्र सार्वजनिक गर्नुअगावै सरकार र पार्टीबारेमा भद्रसहमति कायम भएको थियो । उनका अनुसार महाधिवेशनअगाडि ओली प्रधानमन्त्री र पार्टीमा सेरेमोनियल अध्यक्ष रहने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहने र अढाई वर्षपछि ओली पार्टी अध्यक्ष भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा ओली प्रधामन्त्रीकै रूपमा रहने भए एक मात्र अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डलाई दिने समझदारी भएको थियो । ओलीको कामकारबाहीबाट असन्तुष्टि जनाएका प्रचण्डले अहिले सो विषय लिखित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आफ्ना नेताहरूसमक्ष हाम्फालेर पार्टी एकता नहुने बताएका छन् ।
स्रोत भन्छ,‘हाम्फालेर पार्टी एकता गर्नु भनेको एकता नभई विलय वा प्रवेश हुन जान्छ । हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ, सम्मानजन रूपमा बराबरी संख्यामा पार्टी एकता हुन्छ नत्र हुँदैन भनेर अध्यक्षले स्पष्ट भन्नुभएको छ ।’
ओलीले संख्याबारे आफ्ना नेतालाई मनाए एकता चाँडै हुने नत्र केही लम्बिन सक्ने प्रचण्डले बताएको पनि उनले जानकारी दिए । शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत परिवर्तन चाहने एमाले र सशस्त्र युद्धमार्फत परिवर्तन खोज्ने माओवादी दुवैको एकीकृत पार्टीमा बराबर हिस्सेदारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व र सरकारका विषयमा दुवै नेताबीच सहमति कायम हुन नसकेकाले आधा–आधा सरकार र पार्टी नेतृत्व चलाउने वा पूरै भन्ने विषयमा आआफ्ना पार्टी बैठकमा छलफल गरी शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पावरसेयरिङको विवाद टुंगिएपछि एकताको मिति तोकिने भएको छ । यता, एमालेले जनमतलाई ख्याल गरी पार्टी एकता हुनुपर्नेमा अडान राखिरहेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ६०/४० को भागवण्डा गरेकामा परिणाम ७०/३० को आएकोले सोहीअनुसार एकता हुनुपर्नेमा एमाले नेताहरूको जोड छ ।
यता, माओवादीले केन्द्रमा बराबर र तत्लो तहमा अवस्थाअनुसार पार्टी एकता हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।
इलाम, झापा, धनकुटालगायतका क्षेत्रमा एमाले बलियो भएकाले उसले नेतृत्व पाउने र गोरखा, रुकुम, रोल्पालगायतका क्षेत्रमा माओवादी बलियो भएकाले उसले नेतृत्व पाउनुपर्ने माओवादीको भनाइ छ । यिनै रस्साकस्सीकै बीच नेताहरूले पार्टी एकताका लागि ९ वैशाखको सुनौलो मिति भने गुमाएका छन् ।